Fomba 7 anaovan'ny AI ny marketing amin'ny mailaka amin'ny mailaka | Martech Zone
Fomba 7 anaovan'ny AI ny marketing amin'ny laoniny amin'ny mailaka
Alakamisy, May 28, 2020 Alakamisy, May 28, 2020 Douglas Karr
Herinandro na lasa izay dia nizara ny fomba Salesforce Einstein nanova tanteraka ny dia nataon'ny mpanjifa, naminavina sy nanome fifandraisana manokana izay mitarika fiatraikany ary mampihena ny varotra ho an'ny mpanjifa Salesforce sy Marketing Cloud.
Raha mbola tsy nijery ny anao ianao fitazonana ny lisitry ny mpanjifa tato ho ato, mety ho gaga ianao amin'ny isan'ny mpanjifa misosa mitohy. Betsaka ny safidy any ho an'ny vokatra tsara, ka tsy miraikitra ny mpanjifa noho ny crappy batch sy fipoahana mailaka intsony. Manantena izy ireo fa ny hafatra tsirairay ao amin'ny boaty fampidirana dia misy dikany, ara-potoana ary sarobidy… raha tsy izany dia hiala izy ireo.
Raha te hahasoa, ara-potoana ary sarobidy… ianao dia mila mizara, manivana, manamboatra manokana ary manatsara ny fandefasana mailaka. Tsy ho vita izany raha tsy misy fitaovana mety… fa ny faharanitan-tsaina artifisialy dia manafaingana ny fahafahan'ny mpivarotra hampivelatra ny fampielezan-kevitra miaina sy miaina izay manohy manatsara ny tenany amin'ny fianarana milina.
Io dia ahafahan'ny mpivarotra mandefa hafatra amin'ny hafainganam-pandehan'ny mpanjifany, miaraka amin'ny atiny izay natao manokana sy mahasarika.
Ny revolisiona AI amin'ny marketing amin'ny mailaka
30% amin'ireo orinasa erak'izao tontolo izao no hampiasa AI farafaharatsiny amin'ny iray amin'ireo fizotry ny varotra amin'ny taona 2020. Amin'ny 2035, andrasana i AI hitondra 14 tapitrisa tapitrisa dolara fanampiny amin'ny fidiram-bola ary fiakarana 38% amin'ny tombom-barotra!
Raha ny marina, 61% amin'ireo mpivarotra mailaka no milaza fa ny AI no lafiny manakiana indrindra amin'ny paikadin'izy ireo ho avy. Ireto misy fomba 7 misy fiantraikany amin'ny marketing mailaka ho amin'ny tsara kokoa ny faharanitan-tsaina artifisialy.
Segmentation sy Hyperpersonalization - Ny isa isa sy ny fisafidianana mpihaino dia mampiasa algorithma hanombatombanana ny ho fihetsiky ny mpamaky amin'ny ho avy ary handamina tsara ny atiny haseho azy ireo amin'ny fotoana tena izy.
Fanatsarana ny andalana - AI dia afaka manamora ny famoronana tsipika misy lohahevitra izay inoana fa hanakoako amin'ny mpamaky, manosika azy ireo hanokatra ny mailaka. Io dia manafoana ny tsy fahazoana antoka ny fitsapana sy ny lesoka raha ny momba ny famolavolana andalana lohahevitra mahasarika.
Famerenana indray ny mailaka - Na dia mety mamaly ny mailaka fandaozanao alefa avy hatrany aorian'ny fandaozana aza ny mpanjifa sasany, ny sasany mety tsy vonona ny hividy mandritra ny herinandro. AI dia manavaka ny anelanelan'ireto mpanjifa ireto ary manampy anao mandefa ny mailaka famerenanao amin'ny fotoana mety indrindra, mampihena be ny tahan'ny fandaozana ny sarety
Fanatsarana mandeha ho azy (STO) mandeha ho azy - Miaraka amin'ny fanampian'ny AI, ny marika dia afaka mahavita ny telopolo marketing - manome hafatra marina amin'ny fotoana mety amin'ny olona mety. Tsy manelingelina ve ireo mailaka fampiroboroboana be loatra? AI dia manampy amin'ny fandanjalanjana ny fotoana fandefasana amin'ny alàlan'ny famakafakana ny hetsiky ny mpamandrika, izay maneho ny fotoana tiany.
AI Automation - AI dia tsy mandeha ho azy fotsiny. Mandingana kely kokoa izy io hanampy amin'ny fandefasana mailaka mandeha ho azy mifandraika kokoa amin'ny fandinihana ny fifandraisan'ny mpanjifa taloha tamin'ny marika sy ny fividianana.
Fanatsarana tsara kokoa sy mora kokoa amin'ny Channel - Ny famakafakana ny fahazaran'ny mpanjifa, ny safidiny ary ny fitondrantenany taloha sy efa voalaza mialoha, ny AI dia manampy amin'ny famaritana raha toa ka hanako tsara kokoa amin'ny mailaka, fampandrenesana fanosehana na fantsona hafa izy ireo. Avy eo mandefa ny hafatra amin'ny fantsona mety.
Fitsapana mandeha ho azy - Fitsapana A / B, teo aloha nisy dingana roa-habe dia nifindra tamin'ny maodely fitadiavana hyper omnichannel. Azonao atao ny mizaha toetra miovaova amin'ny permutations sy ny kombina samihafa. Rafitra maro no mandefa santionany, mahatratra valiny ara-statistika manan-kery, ary avy eo mandefa ireo kopia sisa nohamarinina.
Ity ny infographic feno misy famaritana amin'ny antsipiriany isaky ny manova ny varotra mailaka AI.
Tags: aiai automationfanatsarana fotoana mandeha ho azyfanatsarana ny fantsonarahona rahona einsteinhyperpersonalizationpersonalizationsegmentation
Terminolojia mpamorona: endritsoratra, fisie, fanaingoana ary famaritana layout